Maayarka maamulka magaalada dhaxbuur oo ka warbixiyya waxqabadkii 6da bilood ee sanadkan 2006.EC u yaalay Maamulka Magaalda Dh/buur. - Cakaara News
Dh/buur(CakaaraNews) sabti Jan,11,2014.Maayarka maamulka magaalada dh/buur mudane suuldaan maxamed xasan oo waraysi gaar ah siiyay shabakada wararka ee cakaaraNews ayaa sheegay in guulo waawayn maamulka magaalada dh/buur ka soo hooyay Hirgalinta qorshayaashii u yaalay 6da bilood ee sanad miisaaniyeedka 2006 EC.
Mayorka ayaa Tibaaxay in iyaga oo ka duulaya qorshaha u yaalay 6 bilood Dhaanka Horumarka iyo ka qaybgalka bulshada arimaha horumarka ay guulo ka gaadheen dhinacyada waxbarashada caafimaadka iyo jidadka.
mar uu ka hadlayay dhinaca waxbarashada ayaa waxa uu sheegay in shirarkii qimaynta waxqabadkii rubuceedka ahaa si gaar ah diirada loogu loogu saarayay waxqabkii wixii ka qabsoomay dhinacyada tayaynta waxbarashada ay ka soo baxeen natiijoyin aad u wanaagsan Siba Gabdhaha iyo Caruurta Gaadhay da'da waxbarashada ayuu yidhi. Suldaan dhanka ka caafimaadka ayaa uu Sheegay In qorshihii yaalay sidii loogu talagaya u hirgaleen iyadoona isbitaalka Dh/buur lagu soo Kordhiyay Dhismaha Qaybta qaliina iyo Waadhka Caruurta iyadoona Todobaadkii Tegay aanu Xadhiga ka jarnay ayuu yidhi.
Waxaa kale oo uu sheegaymaayarku in dhinaca jidadka siwayn ay u hirgaleen qorshihii loogu tala galsanaa anagoo buu yidhi hirgalinay jidadbadan oo ah kuwa la dhigo dhagaxa qoran cobble stone